घुससहित वडा सचिव कार्यकक्षबाट रंगेहात पक्राउ ! - Everest Dainik - News from Nepal
धनुषाः धनौजी गाउँपालिका वडा नं. २ का वडा सचिव (खरिदार) सुशिल ठाकुर घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन् ।
जन्म प्रमाणित सिफारिस गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस गरेको सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवासको टोली खटिएको थियो ।
ठाकुरलाई सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ घुससहित कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस लकडाउनमा चोरी गर्ने २ महिलासहित ११ जना पक्राउ
ट्याग्स: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, घुस, धनौजी गाउँपालिका, पक्राउ